I-Mississippi River Views: Imbali w/Ubutofotofo bale mihla - I-Airbnb
I-Mississippi River Views: Imbali w/Ubutofotofo bale mihla
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguTama-Lea
I-King size i-memory foam bed kwigumbi lokulala eliphambili, i-Queen size i-memory foam bed kwigumbi lokulala lesibini, i-smart tv kunye neYouTube TV, i-Amazon kunye ne-Netflix. Ikhitshi elikhethekileyo. Indawo efanelekileyo yezilwanyana zasekhaya kunye NOBUHLE bembali, indawo ekuyo kunye nokubukwa kweMlambo iMississippi!!
Bona amaphondo amathathu kwiveranda yokwamkela iindwendwe. Yakhiwe ngo-1897, le ndawo intle enamagumbi okulala ayi-2 inekhitshi lale mihla, igumbi lokuhlambela elineethayile zeshawa nayo yonke into ethe zava ukuze uphumle iinyawo zakho. Funda izimvo zethu eziqaqambileyo, nawe uza kuzithanda!
Umgangatho wokuqala wekhaya yeyakho ngokupheleleyo ukuze uphumle uze uhlale kuyo. Amagumbi amabini okulala, igumbi elikhulu lokuhlala, igumbi lokutyela elahlukileyo kunye nomphezulu wekhitshi. Indawo ephezulu ayinamntu, ngoko uza kuba noxolo nokuzola.
4.92 · Izimvo eziyi-453
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi453
Indawo yethu yindawo entle kwisithsaba se-11th St Historic District. Iindawo ezikufutshane zithi cwaka, zigcwele imithi ibe uzibona kakuhle iindawo ezinyukayo zecawa, izakhiwo ezinembali esedolophini kunye noMlambo iMississippi.
Umbuki zindwendwe ngu- Tama-Lea
Sisoloko sifumaneka nge-app ye-Airbnb ukuba kukho nantoni na oyifunayo. Kungenjalo, khululeka uze wonwabele ukuhlala kwakho.